नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ नियम ! अब धेरैलाई गार्हो हुने
कार्तिक २१, २०७५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, अब नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा राहदानीबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर मात्र सटही सुविधा पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक परिपत्र जारी गरेर बैंकहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, कार्तिक २१, २०७५०८:१९
के तपाई विदेशमा काम गरेर फर्किनु भएको हो ? त्यसो भए पाउनुहुनेछ १० लाखसम्म ऋण
इन्काउन्टरमा रम्दै प्रहरी : हतियारधारी देख्ने वित्तिकै गोली हान्ने रणनीति !
यसकारण हुन्छ जलबिन्दु, कसरी बच्ने ?
हरेक निर्वाचनमा एजेन्डा बन्ने महत्वाकांक्षी योजना चक्रपथ निर्माण अलपत्र
आफ्नै काकाले भतिजलाई घाँटी समातेर उचाली अन्डकोषमा दुई मुक्का हान्दा मृत्यु !